सुन्नुहोस् कपिल शर्माको गोप्य अडियो, जहाँ पत्रकारलाई सकेको गाली गरेका छन् « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
सुन्नुहोस् कपिल शर्माको गोप्य अडियो, जहाँ पत्रकारलाई सकेको गाली गरेका छन्
भारतका चर्चित हास्यकलाकार कपिल शर्माको जिन्दगी थप जटिल बन्दै गएको छ । उनका पछिल्ला गतिविधिका कारण एक पछि अर्को विवाद थपिंदै गएको छ । केहि दिन पहिला कपिलको नाम जोडेर नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।
एक जना भारतीय पत्रकारसँग भएको कुराकानी कारण अहिले कपिल थप आलोचित भएका छन् । कपिलले एक जना पत्रकारसँग गरेको विवादित अडियो अहिले सञ्चार माध्यमसँगै समाजिक सञ्जालमा भाईरल भईरहेको छ । अडियोमा कपिलले पत्रकारलाई सक्दो गाली गरेका छन् ।
पत्रकारले कपिलसँग भएको अडियो संवाद सार्वजनिक गरेका छन् । सुरुमा कपिलले आफ्नो बारेमा गलत समाचार लेखेको भन्दै पत्रकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । निकै आक्रोशित भएका कपिलले एकपछि अर्को गर्दै पत्रकारलाई अपाच्य गाली गर्न थाल्छन् ।
पढ्नुहोस्, पत्रकार र कपिलबीच भएको कुराकानी (तल विस्तृत कुराकानी अडियोमा छ ।)
पत्रकार : हेल्लो
कपिल : विक्की ???
पत्रकार : एस..हजुर को ?
कपिल : हेल्लो विक्की..दिस इज कपिल शर्मा..जसको बारेमा हजुरले धेरै लेखी सक्नुभएको छ । ..ठिक छ, विक्की हामी यस भन्दा अगाडी भेटेका छौ । हजुर एक पटक मेरो सो मा आउनुभएको थियो ।
पत्रकार : हो…एक चोटी म आएको थिएँ, त्यतीबेला सोनी को सो भइरहेको थियो, त्यती बेलामा मैले हजुरको अन्र्तवार्ता लिएको थियो ।
कपिल : हो, हजुरलाई प्रीतिले मसँग भेट गराएको थियो ।
पत्रकार र कपिलबीच भएको कुराकानीको पुर्णरुप यहाँ सुन्नुहोस्
पत्रकार : होईन । उसले भेट गराएको थिएन । उसले ले मसँग कपिलको अन्र्तवार्ता लिनुपर्छ भनेर भनेको मात्रै थियो । त्यती बेला मैले भनेको थिएँ म पक्कै हजुरको अन्र्तवार्ता लिन चाहान्छु ।
कपिल : विक्की..मैले सधैँ हजुरको आर्टिकल पढ्ने गर्छु….हजुरले एक पटक मेरो चलचित्रको बोरमा लेख्नुभएको थियो । ‘कपिल यू आर अ जीरो एक्टर’..मैले यो कुरा बुझ्न सकिन…कि एउटा पत्रकारको लेखाई यति नकरात्मक त हुन सक्दैन…? हजुर सधैँ नकरात्मक समाचार किन लेख्नुहुन्छ ? हजुर यस्तो किन लेख्नुहुन्छ विक्की जी ?
पत्रकार : सर, यो स्टोरी सबैले लेखेका थिए र सबै हैरान थिए…कि हजुरले किन सुटिङ्ग सधैँ क्यान्सील गरिरहनुभएको छ ?
कपिल : विक्की जी शायद म डिप्रेसनमा थिएँ…. के थाहा मलाई कुनै समस्या थियो की ?…..हजुरलाई थाहा छैन म यो समस्याबाट गुज्रिरहेको छु….तर हजुर मेरो बारेमा खाली नकरात्मक लेखीराख्नुहुन्छ ।
पत्रकार : अहिले हजुरको नयाँ सो आएको छ….। त्यसमा रानी मुखर्जी आउने वाला थिईन् । जुन सो को लागि बच्चाहरु प्रतिक्षारत थिए । उनिहरुले पहिला २ घण्टा सम्म प्रतिक्षा गरे । त्यसपछि पनि उनिहरुले थप २ घण्टा कुरे । तर अन्तिममा सो क्यान्सिल भयो ।
कपिल : विक्की…हजुरले यो पनि लेख्नुभयो…कि यशराज ब्यानरले मलाइ एउटा चलचित्रको लागि अफर गरेको थियो । ‘बैंक चोर’ । मैले त्यो चलचित्र रिजेक्ट गरे, किनकी मैले यशराजलाई मन पराउँथीन । त्यो चलचित्र फ्लप भयो….के हजुरले त्यो स्टोरी लेख्नुभयो…? हजुर के समाचार लेख्नको लागि पैसा असुल्नु हुन्छ ? पैसे चाहिए म सँग आउनुहोस् न…, यस्तो समाचार किन लेख्नुहुन्छ ? ( गाली गर्दै………..)
पत्रकार : हजुर यस्तो कुरा नगर्नुहोस्…. यो तरिका गलत हो ।
कपिल : विक्की…मैले तँलाई फेला पारे भने नी तँलाई …(गाली)